Purazi raVaGono Rotsva neMoto-Zvokonzerazve kuGeda Geda kweMeno muZanu-PF
Mapurisa anoti ari kuenderera mberi achiferefeta moto wakabvira kupurazi rehuku ragavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, neSvondo kuBorrowdale Brook muHarare. Moto uyu unouya masvondo mashoma nyika yaviga vaimbova mukuru wemauto, General Solomon Mujuru, avo vakatsvira mumba kupurazi ravo rekuBeatrice.
Mutauriri wemapurisa, VaWayne Bvudzijena, vanoti vave kupedza ongororo yekuziva chakadya VaMujuru asi vati mutauriri wemapurisa muHarare, Inspector James Sabau, ndivo vari kubata nyaya yaVaGono. Asi VaSabau vati havakwanise kutaura sezvo vange vari mumusangano.
Hapasi kunyatsozivikanwa kuti VaGono vakange vari pamba here pakatsva imba inotsotsonyera huku dzavo iyi. Sechava chigariro, motokari dzinodzima moto dze Fire Brigade dzinonzi dzakauya kuzodzima moto dzisina mvura yakakwana.
Vamwe muZanu-PF vataura neStudio 7 vanoti vave kugara vakabatira hana mumaoko uye vave kushaya hope nekuda kwezvave kuitika kuvakuru mubato.
Vakurudzira mapurisa kuti anyatsoongorore nyaya dzemoto idzi kuti pasaite kufungidzirana kwakanyanya sezvo mubato vamwe vanozi vatove makara asionane.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaPedzisayi Rnuhanya, vanova Programmes Manager weCrisis in Zimbabwe Coalition vanoti mapurisa anofanira kunyatsoongorora nyaya dzemoto idzi zvakadzama.